Somaliland oo go’aan afar qodob ah kasoo saartay ka qeyb-galka siyaasada Somalia - Caasimada Online
Home Somaliland Somaliland oo go’aan afar qodob ah kasoo saartay ka qeyb-galka siyaasada Somalia
Somaliland oo go’aan afar qodob ah kasoo saartay ka qeyb-galka siyaasada Somalia
Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta saxiixay xeer dhammaan dadka kasoo jeeda gobollada waqooyi looga mamnuucay ka qeyb-galka arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, kaas oo ka kooban illaa afar qodob.
“Mas’uul, shacab, urur, Axsaab, aqoon-yahan, madax-dhaqameed, suugaan-yahan iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka qaybgala siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go’aanka labada ee Gole waxaa lagu qaadi doonnaa dambi ah “Khimaamo Qaran,” ayaa lagu yiri xeerka uu maanta saxiixay madaxweynaha maamulka Somaliland.
Sidoo kale waxaa go’aankan lagu caddeeyey in haatan wixii ka dambeeya aan la cafin doonin qof kasta oo ka qeyb-gala maamulka siyaasadeed ee Soomaaliya.
“In wixii hadda ka dambeeya aanay cafis lahayn qofkii ka qaybgala siyaasadda Soomaaliya, balse loo gudbin doono Maxkamadda Awoodda u leh in ay xukun ku riddo,” ayuu lagu yiri.
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi waxa uu xeer Madaxweyne oo summaddiisu ay tahay Lr. 16/122021 kasoo saaray mamnuucidda ka qeyb-Qaadashada siyaasadda Soomaaliya.
Markuu Arkay: Waajibaadka uu Dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkaynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka Qarannimada iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan Xeerka, sida ku cad Qodobka 34aad ee Dastuurka Somaliland;
Markuu ku qancay: In ay tahay dambi khiyaamo qaran oo lid ku ah Qarannimada iyo Madax-bannaanida Somaliland ka-qayb-qaadashada hawlaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay Go’aanka Baarlamaanka Somaliland ayuu soo saaray.